Vahinintsika Archives - Page 2 sur 6 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
HERINANDRO MASINA 2017: Zoma 14/04
HERINANDRO MASINA 2017: Zoma 14/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ZOMA) Androany dia hanaraka akaiky ny dian’i Jesosy isika. Ity andro ity no andro sarotra indrindra amin’ny herinandro masina. Ireo ora farany ireo no nangidy indrindra tsy tamin’i Jesosy ihany fa na dia teo amin’ny mpianany koa aza. Voalaza fa vao maraina ny zoma dia nananton-tena …
HERINANDRO MASINA 2017: Alakamisy 13/04
HERINANDRO MASINA 2017: Alakamisy 13/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAKAMISY) Antsoina hoe Alakamisy Masina ity Alakamisy miavaka loatra ity satria nahoana? Ny antony dia satria manana ny toerany lehibe eo amin’ny fiangonana kristiana ny fisiany sy ny zavatra nataon’i Jesosy tamin’io andro io. Mampianatra antsika zavatra roa lehibe i Jesosy amin’io Alakamisy Masina io: ny …